Qureebaad - Gpedia, Your Encyclopedia
Qureebaad la dul saaray macmacaan
Jabuuti, Soomaaliya, iyo Eritrea
Geeska Afrika, Bariga Dhexe iyo Balkans
daqiiq cad, khamiir, biyo, sonkor, milix
Laxoox (Af carabi: بسبوسة, Af Balkan: revani ama ravani, Af Ingiriis : Basbousa) waa cunto fudud oo laga diyaariyo daqiiq cad, khamiir, biyo, sonkor, milix la isku dhex laaqay; taasi oo laga cuno deegaanda Jabuuti, Soomaaliya, iyo Yemen. Sidoo kale qureebaadku wuxuu caan ka yahay deegaano ka mid ah Geeska Afrika, Bariga Dhexe iyo Balkans
1 Diyaarinta Qureebaadka
Qureebaadka waxaa laga diyaariyaa daqiiq lagu qasay fixiso, khamiir, biyo diiran, yeast iyo milix taasi oo si fiican loo garaaco (tumo) si ay iskudhexgalaan iskudarkaasi, ka dib meel la dhigo mudo saacado ah si ay u khamiirto. Sida ugu badan daqiiqda laga diyaariyo laxooxda waxaa laga sameeyaa garowga.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qureebaad&oldid=155917"